तपाईं सुइटर लगाएर सुत्नुहुन्छ ? निम्तन सक्छन् यस्ता समस्या | Himalaya Post
तपाईं सुइटर लगाएर सुत्नुहुन्छ ? निम्तन सक्छन् यस्ता समस्या
Posted by Himalaya Post | १३ पुष २०७८, मंगलवार ०७:२२ |
काठमाडौं – तपाईं सुइटर लगाएर सुत्नुहुन्छ ? एजेन्सीहरुले सुइटर लगाएर सुत्नु हानिकारक रहेको बताएका छन् । जाडोमा चिसोबाट बच्न हामी सबैले न्यानो कपडाको सहारा लिने गर्छौं । यसो गर्दा धेरै पटक मानिसहरु राती पनि शरीरलाई न्यानो राख्न ऊनी कपडा लगाएर सुत्छन् । तर के तपाईंलाई थाहा छ यसो गरेर तपाईंले अनजानमा आफुलाई हानि पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ।
छाला बढी सुख्खा भएमा छालामा एक्जिमा हुने खतरा हुन्छ, जसका कारण मानिसलाई चिलाउने समस्याले सताउन थाल्छ । यही कारणले गर्दा राति न्यानो कपडा लगाएर सुत्नु हुँदैन ।
यदि संवेदनशील छाला भएका व्यक्तिहरू न्यानो कपडा लगाएर सुत्छन् भने, त्यसो गर्दा शरीरको नमी हट्छ, जसका कारण छालासम्बन्धी रोगहरू बढ्छन् ।
जाडोमा प्रायः मानिसहरु खुट्टाको तलाउ न्यानो नहुने गुनासो गर्छन् । यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरु राति खुट्टा न्यानो राख्न न्यानो कपडासँगै मोजा लगाएर सुत्छन् । तर ऊनमा रहेको थर्मल इन्सुलेशनले पसिना राम्रोसँग सोस्दैन। जसका कारण खुट्टामा ब्याक्टेरिया बढ्न सक्छ र छाला पनि हुन सक्छ । यही कारणले गर्दा चिकित्सकहरूले राति सुत्दा ऊनी मोजाको सट्टा सुती मोजा लगाउन सुझाव दिन्छन् ।
राति न्यानो कपडा लगाएर सुत्दा शरीरमा गर्मी बढ्छ, जसले गर्दा बेचैनी र घबराहटको गुनासो हुन्छ । यसबाहेक व्यक्तिलाई कम रक्तचापको समस्या पनि हुन सक्छ। राति सुत्दा न्यानो कपडा लगाउन आवश्यक भएमा थर्मोकोट लगाउन सकिन्छ ।
ऊनी कपडाको फाइबर सुती कपडाको फाइबरभन्दा बाक्लो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राति न्यानो स्वेटर लगाएर न्यानो रजाई लगाउनाले शरीरको गर्मी बन्द हुन्छ । जसले मुटु रोगीलाई समस्यामा पार्छ ।
जाडोमा न्यानो कपडा लगाएर सुत्दा पनि चिलाउने समस्या बढ्न सक्छ । यो किनभने यदि तपाईंको छाला सुख्खा छ भने, ऊन फिलामेन्टहरू यसमा टाँसिन्छन्, कडा हुन्छन् र तन्किन्छन्। जसका कारण छालामा दाग, दाग वा दाग देखा पर्छ । यसबाट बच्नको लागि, स्वेटर लगाउनु अघि आफ्नो सम्पूर्ण शरीरमा बडी लोशन लगाउनुहोस्। जसले गर्दा छालाको आर्द्रता कायम रहन्छ ।
यदि न्यानो कपडा लगाउन आवश्यक छ भने – जाडोमा ऊनी कपडा लगाउन आवश्यक छ भने पहिले सुती वा रेशमी कपडा लगाएर त्यसमाथि ऊनी कपडा लगाएर राती सुत्नु राम्रो हुन्छ ।
Previousजब शेखर कोइरालाले वरीयताको विषयलाई लिएर मनछुने कुरा बताए
Nextकसले गर्यो बेलायती महारानीको हत्या प्रयास ?
टिमुरबाट तेल उत्पादन, एक किलोकै १७ हजार रुपैयाँ !
३ माघ २०७५, बिहीबार १२:५२
सडक विभागको पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत मात्रै
३० बैशाख २०७९, शुक्रबार ०७:१४
सरकारले भन्यो : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अस्वीकार्य
१४ मंसिर २०७७, आईतवार १७:०९
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा राजीनामा
१ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:०२
काठमाडौँका विजयी जनप्रतिनिधिले लिए सपथ
कैलालीको भजनीमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति विजयी
त्रियुगा–१२ को स्थगित मतदान प्रक्रिया अन्योलमा
नयाँ जनप्रतिनिधिको शपथसँगै पालिकाको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु